» दमदार आवाज, जसले चारै जना कोचलाई फर्काए, भाग–४ (भिडियो)
दमदार आवाज, जसले चारै जना कोचलाई फर्काए, भाग–४ (भिडियो)
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार २०:४३
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २६ भदौ । चर्चित गायन प्रतियोगिता ‘भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्लाईन्ड अडिसन राउण्ड चलिरहेको छ । यस भिडियो सामग्रीको तेस्रो भागसम्म तपाईँले चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल भएका प्रतियोगीहरुमध्ये १३ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा हेरिसक्नु भएको छ । यदि तपाईले भिडियो हेर्न छुटाउनु भएको भए डिस्क्रीप्सनमा लिंक राखिएको छ । भिडियोको यो चौथो भागमा हामी चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल थप ३ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । हेरौँ भिडियो–
कुमा सागर, भक्तपुर–वेष्टर्न रक तथा गीतार बजाउन मन पराउने कुमा सागरले नेवारी सँस्कृति अनुसार नलागेको भन्दै कहिले काँही आफन्तको गुनासो पनि भोग्छन् तर उनी आफुलाई मनपर्ने शैलीको गीत गाउनमा तल्लिन् छन् । लुकी–लुकी गीतार सिकेका उनले पढाई समेत बिगारे तर उनको संगीतको भोक मरेन । गीतार सिकेका कारण आफुले कुटाई खाएको पल पनि उनी सम्झन्छन् । ब्लाईन्ड अडिसनमा उनले ‘मायाको डोरीले’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको पर्फोमेन्स् र आवाजमा चारै जना कोच उनीतिर फर्किएका थिए । उनी कोच आश्थाको टिममा छन् । आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज सबैभन्दा राम्रो लाग्छ ? तपाईको विचारमा को फाईनलसम्म पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोको अर्को भाग पनि हेर्न नभुल्नुहोला ।